नायिका रेखाथापाले एयरपोर्टमा सामान लुटेको बिषयलाई यसरी भाईरल भयो | Mirmee.com
नायिका रेखाथापाले एयरपोर्टमा सामान लुटेको बिषयलाई यसरी भाईरल भयो
विदेश दुख गरेर कमाएको पैसाले किनेको सामान बिमानस्थलमा जफत हुन थालेपछि नागरिक समाज भड्किएको छ ।
पछिल्लो समय नागरिक उड्डयन कार्यालयले विदेशबाट फर्कने नेपालीले ल्याएको मदिरा, आइफोन जस्ता बहुमुल्य सामान जफत गरि लिलामी बिक्रीमा राखेपछि यसबारे थुप्रैको चित्त दुखाइ रहेको छ ।
यसै क्रममा नायिका तथा निर्मात्री रेखा थापाले विदेशबाट आउने नेपालीको सामान खोस्ने सरकारी कदमको विरोध गरेकी छन् ।
उनले सक्ने र हुनेले क्विन्टलका क्विन्टल सुन ल्याउन हुने तर दुबई, कतार, मलेसियामा रगत पसिना बगाएर फर्केका नेपालीको गिफ्टजन्य सामान जफत गरेको भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वप्रति नै कटाक्ष गरेकी छन् । उनले ‘आफू अर्बौका सुविधा लिने, राज्यकोष खाएर बस्ने अनि मजदुरको झोला खोस्ने ?’ भन्दै प्रश्नसमेत गरेकी छन् ।
आँखाले देखेको छु । ती श्रम क्याम्पमा बस्दा हुने अनुभूति नजिकबाट सुनेकी छु । जब वर्षौपछि घर फर्किने सुखद दिन आउँछ, आफन्त र घररिवारको लागि खुसीको ससाना उपहार लिएर फर्कन चाहनु स्वाभाविक हो । दुइटा फोन, एइटा टि.भी वा त्यस्तै अरु सामान ।
निर्धा जनताले मिटर ब्याज तिरेर पराइ देश जान परेकोमा दया नभएको सरकार उनीहरूको कमाइले किनेको नासो देखेर यति जलेको किन होला ? तिनै युवाको पसिनाको रेमिट्यान्सबाट चलेको देशमा उनीहरूको आगमनमा लुट मच्चाउन किन परेको छ ? सक्नेले र हुनेले क्विन्टल सुन छिराउने एयरपोर्टको काहानी जनताले थाहा पाएका छन् ।
यिनै मजदुर बेचिखाने ब्रोकर, तिनैको पैसा माग्ने समाजसेवा, तिनैको नाममा राजनीति, अनि उनीहरूको कमाइको नासो किन खोस्दैछ सरकार ? के परिवारका लागि चिनो ल्याउनु अपराध हो ? मेरो बिचारमा यो श्रमिकमाथि शोषण र अत्याचार हो । जाने बेला रुँदै र फर्कने बेला पनि रुवाउने सरकारका यस्ता श्रमिकमारा कदमविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ । हाम्रा श्रमिक दाइभाइ यो देशका गौरव हुन् र उनीहरूको अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो बन्द गरिएन भने, म एल्लो किन नहोस् एयरपोर्ट अगाडि विरोध गर्न जान तयार छु ।
← भारी हिमपातले जनजीवन कष्टकर
ओली–प्रचण्डलाई भीम रावलको चेतावनी– ‘संयमित नभए पार्टी फुट्न सक्छ’ →